January « 2019 « Online Tv Nepal
दीपिकासँग विवाहपछि यी तीन कुरा गर्न पाउँदैनन् रणबीर सिंह, सुनेर हाँसो रोकिने छैन्
एजेन्सी – रणबीर सिंह र दीपिका पादुकोणको विवाह भएको दुई महिना भइसकेको छ । बिहे अघि पनि चर्चामा आउको यो जोडी बिहे पछि पनि विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छ । विवाहपछि पनि यी दुई कुनै न कुनै कारणले चर्चामा छाइरहन्छन् । हालै भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा अभिनेता रणवीरले विवाहपछि आफूले तीन काम
सबैले आकाशतिर परेवा कति छिटो उड्यो भन्दै हेर्न थाले तर परेवा भुँइमा झर्‍याे
चितवन – उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनले आयोजना गरेको ‘चितवन महोत्सवम’को उद्धघाटन खल्लो भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख अतिथि रहेका महोत्सवको परेवा उडाएर उद्धघाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष सहन प्रधानले हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेवा हातमा थमाए । आफू पनि आडैमा बसी उडाउन आग्रह
काठमाडौँ – ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिमा गुमेको जमीन फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन शुरु गरेको छ । पृथ्वी जयन्तीका दिन सिंहदरबारको पश्चिमढोकास्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिक परिसरबाट शुरु गरिएको अभियान आगामी चैत मसान्तसम्म जारी रहने तथा मुलुकभित्र र बाहिरका स्थानबाट एक लाखभन्दा बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने छ ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –ऋणभार भने बढ्ने सम्भावना छ । मध्याह्नदेखि ईष्र्या गर्नेहरूले फसाउन सक्छन् । सोखले फजुल खर्च बढाउन सक्छ । लगनशील बन्दा भविष्यमा फाइदा हुने काम सुरु गरिने छ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिने छ । रोकिएका काम बन्नुका साथै
घटना रहस्यमय बन्दै,हत्याको घटना बाहिर आउने संकेत देखिएसँगै बम्जन आश्रमबाट दुई महात्मा गुरु गिरफ्तार…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौँ : लिटिल बुद्ध भनेर प्रचार गरिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुलीस्थित आश्रमबाट प्रहरीले दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।पक्राउ पर्नेमा आश्रमका महात्मा गुरु भनिने सर्लाहीका गोपाल योञ्जन र मकवानपुरका इन्द्रबहादुर स्याङतान रहेका छन् ।सिन्धुपाल्चोकमा रहेको बम्जनको आश्रमबाट केहि बेपत्ता र हत्या भएको समाचार बाहिरिएपछि सिआइबीको टोली त्यहा पुगेको थियो ।सिन्धुलीस्थित बम्जन आश्रममा बुधबार
मंगल ग्रह भन्दा चिसो ठाउँ जहाँको तापक्रम माइनस ७१ डिग्री (फोटो फिचर)
अहिले जाडो आफ्नो चरम सीमामा रहेको छ । देशभर हिमपात भएको खबर आइरहेको छ । यस्तै संसारकै अति चिसो ठाउँ जहाको तापक्रम -७१ डिग्री रहेको छ । यति धेरै चिसो जहाँ आजपनि मानव बस्ती रहेको छ । मानब जीवनको कल्पना समेत गर्न मुस्किल रहेको रूस को ओयमयकों गाँउमा ५०० मानिस अहिलेपनि बसोबास गर्दछन् । सामान्य अवस्थामा
विश्वको अर्को नाच्ने गीतको भिडियो सार्वजनिक !
गायक विश्व नेपाल आफ्नो नया“ गीतको म्युजिक भिडियोमार्फत दर्शक तथा स्रँेतामा आएका छन् । ‘मीठो साह्रै मीठो…’ गीतको अपार सफलतापछि गायक विश्व नेपाली तथा द नेक्स्ट ग्रुप पुनः एकपटक नया“ गीतको भिडियो लिएर आएका हुन् । ‘कवि देवकोटा….’ शीर्षकको उक्त गीतमा गायक नेपालीलाई गायिका सुजाता उपाध्यायले साथ दिएकी छिन् ।
रेशम चौधरी संसाद बन्दा, रबि लामिछाने किन प्रधामन्त्री नबन्ने – डा. केसी…(हेर्नुहोस् भिडियो)
ताप्लेजुङमा जन्मिएका डा. सुरेन्द्र केसी करिब तीन दशकदेखि प्राध्यापनमा सक्रिय छन्। राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिएका उनका झण्डै दुई दर्जन पुस्तक, ६ सयभन्दा बढी लेख रचना प्रकाशित छन्। अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्राजुएट गरेका डा. केसी खरो विचारका लागि प्रख्यात छन्। उनले गरेको बिचारले नेतालाइ पोल्छ र जनतालाई एक किसिमको
पौने २ करोडसहित मालपोतका लेखा अधिकृत फरार !
मालपोत कार्यालय भरतपुरका लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जी एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ लिएर भागेका छन्। तीन वर्षयता लेखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत उनी मंसिर २५ गतेदेखि सम्पर्कविहिन छन्। प्रमुख मालपोत अधिकृत लालकृष्ण पौडेलकाअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणमा रकम बेरुजु देखिएको छ। मंसिर ६ गते आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यालयले रकम दाखिलाको पत्र पठाएको थियो